ဆောင်း တွင်း ကာ လ လူ ကြီး များ ကို ဂရု စိုက် စေ ချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဆောင်း တွင်း ကာ လ လူ ကြီး များ ကို ဂရု စိုက် စေ ချင်
ဆောင်း တွင်း ကာ လ လူ ကြီး များ ကို ဂရု စိုက် စေ ချင်
Posted by The Reds on Dec 28, 2010 in Myanma News, News |9comments
ယ ခု နှစ် ဆောင်း ကာ လ သည် ယ ခင် နှစ် များ နှင်. မ တူ အ အေး ဓာတ် ပို မို လွန် ကဲ ခြင်း ကြောင်. နှာ စေး တာ ၊ နှာ ခေါင်း ပိတ် တာ ၊ ဖျား နာ တာ တို. ဖြစ် တတ် တဲ. အ ပြင် ရော ဂါ အ ခံ ရှိ သော လူ ကြီး များမ ကြာ ခ ဏ ဖျား နာ နေ ကြ ပါ တယ် ။ အ ဘယ် ကြောင်. ဆို သော် ကျွန် တော် ကိုယ် တွေ. ကြုံ ခဲ. လို. မျှ ဝေ လို ချင် ဖြစ် ပါ တယ် ။ အ ကြောင်း က တော. အိမ် နား က အ ဘွားရဲ. မ ထင် မှတ် ပဲ အ သက် ပေး ခဲ. ရ လို. ပါ ။ အ ဘွား ဆို ပေ မဲ. အ သက် က ၆၀ ကျော် သာ ရှိ ပါ သေး တယ် ။ သွေး တိုး ၊ နှလုးံ ၊ ဆီချို ရော ဂါ က တော. အ စုံ ရှိ တယ် ဗျာ ။ တစ် နေ. မ နက် မှာ ဆွမ်း မ လောင်း ခင် ၇ နာရီ လောက် မှာ ရေ ကို မ ဆင် မ ခြေ ချိုး ပြီး ဆွမ်း ဆင်း လောင်း ပါ တယ် ။ ဆွမ်း လည်း လောင်း ပြီး ရော တစ် ခါ တည်း ပစ် လဲ သွား ပါ တယ် ။ ဒါ နဲ. ဆေး ရုံ တင် တော. ဦး နှေက် သွေး ကြော ပျက် သွား ပြီး လေ လည်း ဖျက် သွား ပါ တယ် ။ လုးံ ၀ ကို သ တိ မ ရ တော. ဘဲ ဆေး ရုံ မှာ လည်း သိပ် မ နေ ခဲ. ရ ပါ ဘူး တစ် ပတ် ပြည်. တဲ. နေ. မှာ ပဲ သေ ဆုးံ ခဲ. ပါ တယ် ။ ဒါ ကြောင်. အ ချန် မ တော် ရေ ချိုး တတ် သော လူ ကြီး များ ကို ဂ ရု စိုက် စေ ချင် ပါ တယ် ။
ဆောင်းတွင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး နွေ နေပူ ပြင်းပြင်းမှာလည်း ရေချိုးမှားရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လူကြီးတွေက အသက်ကြီးတာကို မေ့နေပြီး အရင်က လုပ်တာဘဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.. အေးဆေးဘဲ ဆိုပြီး လုပ်တော့ အသက်အရွယ်က ဒဏ်မခံနိုင်တော့ ကျန်းမာရေးတွေ ထိခိုက်ကုန်တာ။
ဟုတ် တယ် ဗျာ … ပြော ပြ ရင် လည်း လူ ကြီး တွေ က လက် မ ခံ ချင် ကြ ဘူး ဗျာ ..
လူကြီးတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး ဒါမျိုးကအရွယ်မရွေး ဂရုစိုက်ရမှာပါ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ နုနယ်တဲ့ လသားအရွယ် ကလေးငယ်တွေ တစ်ချို့က အသန့်ရှင်းလွန်ပြီးရေ၀တ်ခဏခဏ တိုက်နေလို့ မနက်ကပဲ ဆိုင်နားက ကလေးအမေ တစ်ယောက်ကို သတိပေးခဲ့ရသေးတယ် ။ ကိုယ့်တော့ မရှိပဲနဲ့ အားလုံး လိုက်ပြောနေရတော့လည်း ဟီးးးးးး မကောင်းဘူးနော့ အမြင်မတော်တော့လည်းပြောမိတာပဲ
သူငယ်ချင်း တယောက် အမေဆို ခေါင်းလျှော်ပြီး ခေါင်းရေသေချာ မသုတ်ဘဲ အိမ်ရှေ့ ၀ရံတာ မှာ လေအတိုက်ခံလိုက်တာ ပါးရွဲ့သွားလို့.. ဆေးခန်းပြေးရတယ်။ ဆေးခန်းမှာ လသားကလေးက အစ အဲကွန်း အောက်မှာ မေ့ပြီး ထားမိလို့ ကလေးက မလှုပ်တော့လို့ လာပြတာတို့ စုံနေတာဘဲတဲ့.. ပြန်ပြောပြတာ.. ကြောက်စရာကြီး။ အမှန်တော့ အပူပိုင်းမှာ မွေးတဲ့ လူက အပူပိုင်း ရာသီဥတုနဲ့ နေမှ အဆင်ပြေတာ.. အအေး သိပ်ကြိုက်ရင် ကိုယ်ခန္ဓာကြီးက မခံနိုင်ဘူး။ ဖြစ်တော့မှ ဆေးရုံဆေးခန်း ပိုက်ဆံ ကုန်တာထက် စိတ်ညစ်ရတာ ပိုဆိုးတယ်။
ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီးတွေကပြောတာပေါ့.. ရေမချိုးလို့သေတဲ့ မသာ မရှိပါဘူး။ ရေချိုးမှားလို့သေ တဲ့ မသာတွေသာ များပါတယ် ဆိုကြတယ်နော်..။
ရေမချိုးရင် အပူ အခိုးငုတ်ပြီး ကိုယ်အပူရှိန်တွေ တက်တတ်ပါတယ်။
အပူသိပ်ကြီးရင်တောင် ရေခဲရေနဲ့ ရေချိုးပေးရတာတောင် ရှိပါတယ်။
အားလုံး မသမျှတအောင် နေတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
ဆုံးမစကားများကိုမှတ်သားရပါ၏ .. ကျေးဇူးကြီးလှပေသည်။
etone ကတော့ မနက်စောစောလည်း ရေချိုးတာပဲ သူများ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်ချမ်းနေချိန် အနွေးထည်မပါပဲ အလုပ်သွားတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ် ။ ကိုယ်က မနက်လင်းတာနဲ့ မီးဖိုထဲဝင် ချက်ပြုတ် ၊ ရေမိုးချိုးပြီး အလုပ်ခွင်မှီအောင်ဝင်ရတယ် ဆိုတော့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပြီး သိပ်မအေးလို့ ရေချိုးလို့ရတာ ။